သွေးဆုံးရယ် ကိုင်ချိန်တန် - YOYARLAY Digital Media and News
Published: September 3, 201810:46 am Updated: February 13, 20196:11 pm
“သွေးဆုံးကိုင်တယ်” ဆိုတာ သူသူကိုယ်ကိုယ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားဖူးနေကျမို့ ရင်းနှီးနေပြီးသား စကားလုံး တစ်ခုပါ။ မိန်းမသားများ ဓမ္မတာစက်ဝန်း ရပ်နားချိန် … တစ်နည်း သွေးဆုံးချိန် ပတ်ချာလည်ကာလလောက်မှာ ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေကို အကြမ်းဖျင်း ခြုံငုံပြီး သွေးဆုံးကိုင်တယ်လို့ ပြောကြတာလည်း ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
အသက် ၄၅ နှစ်ကနေ ၅၅နှစ် ….. ဒါဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသမီးအများစု သွေးဆုံးနေကျအရွယ်ပါ…။ ရာသီသွေးပေါ်တစ်လှည့် မပေါ်နှစ်လှည့်…ရာသီသွေးပမာဏကိုကြည့်ရင်လည်း နည်းတစ်ခါ များတစ်လှည့်နဲ့….နောက်ဆုံး တဖြည်းဖြည်း ရာသီလုံးဝမလာတော့ဘဲနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုး လုံးဝရာသီမလာတော့တာ ၁၂ လဆက်တိုက်ကြာမြင့်သွားပြီဆိုရင်တော့ သွေးဆုံးသွားပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါပြီ။
ကဲ …. သွေးဆုံးကိုင်တဲ့အကြောင်းဆက်လိုက်ပါမယ်။ သွေးဆုံးကိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာ အဓိကအားဖြင့် အရပ်အခေါ် မီးယပ်ချမ်းဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အပူအအေးမမျှခြင်း၊ မိန်းမကိုယ် ခြောက်သွေ့လာခြင်း၊ အသားအရေ ခြောက်သွေ့လာခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိရှခံစားလွယ်ခြင်း၊ စိတ်အပြောင်းအလဲ အတက်အကျမြန်ခြင်း၊ လိင်မှုရေးရာများကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာခြင်း/ စိတ်မပါခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ညအိပ်မပျော်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ ….. ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီတွေစုလာမယ်…ဒါကြောင့် လူတွေပြောကြတာရှိတယ် …. မိန်းမတွေအသက်ကြီးရင် အလိုလို ဝလာကြတယ်ဆိုတာ…။
အမှန်က ကိုယ်ခန္ဓာက အရင်လောက် အဆီတွေကို ချေဖျက်မပေးနိုင်တော့တာကြောင့် ဝမ်းဗိုက်၊ လက်မောင်း၊ ပေါင်၊ တင်ပါး … စတဲ့နေရာတွေမှာ အဆီတွေစုပုံလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေကိုကြည့်ဦးမလား …. ငယ်ငယ်ကလို မဟုတ်တော့ပါဘူး … ပါးလာ၊ ကျဲလာမယ်၊ ရင်သားတွေ ပြည့်ပြည့်တင်းတင်းမရှိတော့ဘဲ လျော့ရဲလာမယ်၊ အရိုးတွေပွမယ် ကျိုးလွယ်လာမယ်။
ဒါဟာ မိန်းမသားတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့် သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ သားဥအိမ်တွေက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟော်မုန်းတွေ မထုတ်နိုင်တော့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကာလမှာ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ပြောင်းလဲမှုများစွာဖြစ်တတ်တာကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင်က သိရှိနားလည်ထားပြီး အပြောင်းအလဲကို လက်ခံနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၊ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်း ဖေးမကူညီမှု၊ ဂရုစိုက်မှုဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
အချို့ အမျိုးသမီးတွေမှာ သွေးဆုံးကိုင်လက္ခဏာတွေ သာမန်ထက်ပိုပြီး ဆိုးရွားပြင်းထန်နိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ ဆေးဝါး အကူအညီတွေ လိုကောင်းလိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်လာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဆွေးနွေးမှုလုပ်တာ မနှောင့်နှေးဖို့လည်း သတိပြုစေချင်ပါတယ်။
Previous Previous post: ယာယီအတွက်သာ ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း တည်မြဲသွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ် (၁၀) ခု
Next Next post: အမြဲတမ်း အတွေးလွန်နေတတ်သူတွေမှာသာ ရှိနေတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ
Published: December 14, 20163:41 pm Updated: February 18, 20203:54 pm